Cudurka E. coli oo Sweden soo gaaray | Somaliska
Waaxda Agaasimka Cuntada (Livsmedelsverket) ayaa waydiisatay dukaamada cuntada in ay baaritaan ku sameeyaan wadamada laga soo dhoofiyo Qajaarka ay iibiyaan oo la sheegay in uu sabab u yahay cudur cusub oo Germalka ka bilowday balse hada Sweden soo gaaray. Cudurkaan ayaa la sheegay in uu ka dhashay bakteriyo laga helay Qajaarka laga keeno dalka Spain, isagoo dhowr boqol oo qof ku saameeyay Germalka. 36 Qof ayaa ilaa hada la il daran cudurka gudaha Sweden. Cudurkaan ayaa la sheegay in uu yahay mid halis ah, iyadoo dadka hada uu soo ritay ay 10 ka mid ah xaalad qatar ah ku sugan yihiin, cudurka ayaa la sheegay in uu waxyeelo u geysan karo kelyaha iyo xididaha dhiiga qaada. Dadkaan uu soo ritay cudurka ayaa la sheegay in uu saameeyay ka dib markii ay Germalka booqasho ku tageen.
Waaxda Agaasimka Cuntada (Livsmedelsverket) ayaa waydiisatay dukaamada cuntada in ay baaritaan ku sameeyaan wadamada laga soo dhoofiyo Qajaarka ay iibiyaan oo la sheegay in uu sabab u yahay cudur cusub oo Germalka ka bilowday balse hada Sweden soo gaaray.
Cudurkaan ayaa la sheegay in uu ka dhashay bakteriyo laga helay Qajaarka laga keeno dalka Spain, isagoo dhowr boqol oo qof ku saameeyay Germalka. 36 Qof ayaa ilaa hada la il daran cudurka gudaha Sweden.
Cudurkaan ayaa la sheegay in uu yahay mid halis ah, iyadoo dadka hada uu soo ritay ay 10 ka mid ah xaalad qatar ah ku sugan yihiin, cudurka ayaa la sheegay in uu waxyeelo u geysan karo kelyaha iyo xididaha dhiiga qaada.
Dadkaan uu soo ritay cudurka ayaa la sheegay in uu saameeyay ka dib markii ay Germalka booqasho ku tageen.
Ilah umada haka badbadsho cudurkan idaacada aya kamaqlay marka ka diktonada bulshoy insh allah qofki xanun ama shakiyo dhakhtarka la xarir plz